कोरोना संक्रमणबाट ताप्लेजुङका १ पुरुषको मृत्यु — Sanchar Kendra
१ओलीलाई कसले दियो सुरक्षा थ्रेट ? गृहको यस्तो रिर्पोटिङ गरेपछि चाले कडा कदम
२धुम्बाराहीमा बस्ने भनिएको नेकपा सचिवालय बैठक बालुवाटारमै बस्ने
३आज फेरि बढ्यो सुनको मूल्य, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ?
४कोरोना महामारीलाई लिएर विश्वमा भयो अर्को डरलाग्दो पुष्टि, अब के हुन्छ ?
५काठमाडौंका यी स्थानमा आज दिनभर बिजुली नआउने
६रोजगारीका लागि बिदेश जान चाहानेहरुलाई खुसीको खबर, तर पालना गर्नुपर्नेछ यस्तो नियम
७नेकपा हाइकमाण्ड बैठक बस्दै, प्रचण्डलाई बहुमत आउने निश्चित भएपछि यस्तो छ ओली समुहको तयारी
८राजतन्त्रको पक्षमा कसले गर्दैछ देशभर श्रृंखलाबद्ध प्रदर्शन ? के हो खास रहस्य
९आज २०७७ मंसिर १६ गते मंगलबार, यी राशिका लागि हुनेछ एकदमै शुभ, कुन राशिलाई छ तनाव ?
१०९ महिनापछि नेपालीहरुका लागि खुसीको खबर, पुस १ देखि लागु हुनेगरी सरकारले गर्यो यस्तो निर्णय
११कोरोना संक्रमणबाट थप २९ जनाको मृत्यु
१२नेपालमा आज मात्रै थप यति धेरै जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, कहाँ कति ?
कोरोना संक्रमणबाट ताप्लेजुङका १ पुरुषको मृत्यु
काठमाडौँ । कोरोना भाइरस कोभिड १९ संक्रमित पूर्व गोर्खा सैनिकको बेलायतमा मृत्यु भएको छ । योसँगै बेलायतमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुने नेपालीको संख्या ४५ पुगेको छ।
ताप्लेजुङ मौवाखोला स्थायी घर भएका ७७ वर्षीय कर्णबहादुर राईको उपचारको क्रममा शनिबार मृत्यु भएको लण्डनस्थित नेपाली दूतावासका प्रवक्ता शरदराज आरणले जानकारी दिए।
श्‍वासप्रश्‍वासमा समस्या देखिएपछि १० दिनअघि उनलाई मेडिस्टोन अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। राई तीन वर्षदेखि बेलायतको मेडिस्टोनमा श्रीमती, एक छोरा र एक छोरीसहित बस्दै आएका थिए।
यस्तै कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट विश्वभर ७८ जना नेपालीको मृत्यु भएको छ। शनिबार साँझसम्म कोरोना भाइरसबाट विश्वभर ७८ नेपालीको मृत्यु भएको छ भने ५ हजार ५ सय बढी संक्रमित भएको एनआरएनएले जनाएको छ।
एनआरएनएको स्वास्थ्य समितिले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार सबै भन्दा बढी बेलायतमा ५१ जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै संयुक्त राज्य अमेरिकामा कोरोना भाइरस कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या १५ पुगेको छ।
जसमध्ये मध्य न्युयोर्कमा १२, कोलोराडोमा २ र भर्जिनियामा १ जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै, संयुक्त अरब इमिरेट्स्ट (यूएई) मा ६, आयरल्याण्डमा १, जापानमा १, टर्कीमा १ र नेदरल्याण्डमा १, बहराइन १, स्वीडेन १ जनाको कोरोना भाइरसका कारण ज्यान गएको एनआएरएनएले जनाएको छ।
नेपाल बाहेक विश्वभर ५ हजार ४ सय ७२ जना गैरआवासीय नेपालीहरु कोरोनाबाट संक्रमित भएका छन्। जसमध्ये २ हजार भन्दा बढी नेपाली निको भइरसकेका छन्।
स्वास्थ्य समितिका अनुसार कतार २ हजार ३ सय, अमेरिकामा १ हजार ५ सय, युके १ हजार, बहराइनमा २ सय ४५, यूएईमा १ सय ४९, कुवेतमा ७८, नेपाल १०९, साउदी अरबमा ३०, पोर्चुगलमा २६, आयरल्याण्डमा २२, स्पेनमा १२, अष्ट्रेलिया १२, बेल्जियममा ६, जापानमा १०, स्वीडरल्याण्डमा ५, क्यानाडामा १०, जर्मनीमा ४, फिनल्याण्ड ४, साईप्रसमा ३, मलेसियामा ५१, न्युजिल्याण्डमा ३, माल्दिभ्समा २, माल्टामा २, हङकङमा २, म्यानमारमा १, फ्रान्समा १ जना नेपालीलाई कोरोना संक्रमण भएको छ ।
यसैगरी स्पेन र अष्ट्रेलियामा १२-१२ जना तथा जापान र क्यानडामा १०-१० जना नेपाली संक्रमित छन् । बेल्जियममा ६, स्वीटजरल्याण्डमा ५ तथा जर्मनी र फिनल्याण्डमा ४-४ जना नेपालीलाई कोरोना पुष्टि भएको छ । यसैगरी साइप्रस र न्युजिल्याण्डमा ३-३ जना, माल्दिभ्स, माल्टा र हङ्गकङ्गमा २-२ जना तथा म्यानमार र फ्रान्समा १-१ जना गैरआवासीय नेपालीलाई कोरोना संक्रमण भएको एनआरएनएले जनाएको छ ।
विश्वमा महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)बाट ४१ लाख ६२३ जना संक्रमित भएका छन् ।
संक्रमितमध्ये १४ लाख ३९ हजार ४३१ जना उपचारपछि निको भएका छन् । अहिले २३ लाख ८० हजार २७६ जनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । उपचाररतमध्ये ४७ हजार ६८३ जनाको अवस्था गम्भीर छ ।
यस्तै विश्वका २१२ देशमा फैलिएको यो संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या आइतबार बिहानसम्म २ लाख ८० हजार ४३१ पुगेको छ । एकैदिन ४ हजार २४८ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ८८ हजार ९९७ जनामा नयाँ संक्रमण देखिएको छ ।
कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट युरोपियन मुलुकमा १५ लाख ८१ हजार २५६ जना संक्रमित छन् । एकै दिन २७ हजार ५५६ जनामा नयाँ संक्रमण देखिएको छ । यो अघिल्लो दिनको तुलनामा झण्डै एक हजार कम हो ।युरोपका देशहरुमा अहिलेसम्म १ लाख ५१ हजार ७६५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । बितेको २४ घण्टामा मात्रै १ हजार ५१ जनाको मृत्यु भएको छ ।
अहिलेसम्म ६ लाख ४७ हजार २१० जना उपचारपछि निको भएका छन् भने ८ लाख ६ हजार ८६३ जनाको उपचार भइरहेको छ । उनीहरुमध्ये १४ हजार ३५४ जनाको अवस्था गम्भीर छ ।
एसियाली देशका कोरोनाको संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या २१ हजार ८५१ पुगेको छ । ६ लाख ५० हजार ८९८ जनामा संक्रमण देखिएको छ । संक्रमित ३ लाख ५९ हजार ३८२ जना निको भएका छन् । २ लाख ६९ हजार ६६५ जनाको उपचार भइरहेको छ । जसमध्ये ५ हजार ८ जनाको अवस्था गम्भीर छ ।
उत्तर अमेरिकी मुलुकमा कोरोना संक्रमितको संख्या १४ लाख ७४ हजार ५३१ पुगेको छ । कोरोनाकै कारण अहिलेसम्म ८९ हजार ५० जनाले ज्यान गुमाएका छन् । दक्षिण अमेरिकी मुलुकमा पनि आज एकैदिन १५ हजार ७७९ जनामा नयाँ संक्रमण देखिएको छ । योसँगै संक्रमितको संख्या २ लाख ९८ हजार १२५ पुगेको छ । मृतकको संख्या १५ हजार ४ सय पुगेको छ ।
संक्रमितमध्ये १ लाख ३ हजार ६२० निको भएका छन् भने १ लाख ७९ हजार १०५ जनाको उपचार भइरहेको छ । अफ्रिकी मुलुकमा ६१ हजार ९८५ मा कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ । अहिलेसम्म २ हजार २३२ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । अस्ट्रेलियासहित ओसियान मुलुकमा ११८ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । अहिलेसम्म ८ हजार ५२५ जनामा संक्रमण देखिएको छ ।
कोरोनाका कारण जेलभित्रै दङ्गा, अहिलेसम्म आठ जनाको मृत्यु, यस्तो छ थप विवरण